Tarisa WiFi Signal Simba - Kana mambure ako achitaridza kunonoka kana mapeji ewebhu asingaregi, dambudziko rinogona kunge riri rako reWi-Fi chinongedzo. Pamwe uri kure zvakanyanya kubva pachigadzirwa, kana zvikamu zvakakora zviri kutadzisa chiratidzo. Ingotarisa yako chaiyo chiratidzo chesimba reWi-Fi.
Nei WiFi Signal Simba ichiita mutsauko
Chiratidzo chakasimba cheWi-Fi chinoratidza chinongedzo chakavimbika. Izvi zvinoita kuti iwe utore kubatsirwa kwakazara kweiyo internet kumhanya kunowanikwa kwauri. Simba rechiratidzo reWi-Fi rinovimba nezvinhu zvakawanda, semuenzaniso kuti uri kure zvakadii neiri router, ingave iri 5ghz kana 2.4 kubatana, uye mhando yemadziro padhuze newe. Iyo iri padyo newe kune iyo router, yakachengeteka. Sekubatana kwe2.4ghz kuenderera mberi nhepfenyuro, vanogona kuve nematambudziko ekupindira. Madziro makobvu akagadzirwa nezvinhu zvakaomarara (senge kongiri) zvinodzivirira chiratidzo cheWi-Fi. Chiratidzo chisina kusimba, pachinzvimbo, chinotungamira kunonoka kumhanya, kudonhedza, & mune mashoma mamiriro 'kumisa kuzere.
Haasi ese matambudziko ekubatanidza mhedzisiro yesimba remasaini risina kusimba. Kana mambure ari pafoni yako kana piritsi ari kunonoka, tanga nekutangazve iyo router kana iwe uchikwanisa kuiwana. Kana nyaya ikaenderera, nhanho inotevera ndeyekuona kana Wi-Fi iri nyaya. Edza kushandisa iyo internet nechishandiso chakabatana kuburikidza neEthernet. Zvakadaro Kana iwe uine matambudziko, iyo network ndiyo dambudziko. Kana iyo Ethernet yekubatanidza iri yakanaka & iyo router reset isina kubatsira, saka ndiyo nguva yekutarisa iyo chiratidzo chesimba.
Shandisa Yakavakirwa-mukati Inoshanda Sisitimu Inobatsira
Microsoft Windows uye mamwe masisitimu anoshanda ane chinhu chakavakirwa-mukati chekutarisa isina waya netiweki. Iyi ndiyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekuyera simba reWi-Fi.
Mumashanduro matsva eWindows, sarudza network network pane taskbar kuti uone network isina waya yawakabatana nayo. Kune mabhawa mashanu anoratidza simba rechiratidzo rekubatana, uko iko kubatana kwakanyanya uye mashanu ndiko kwakanyanya.
Uchishandisa Tabletor Smartphone
Imwe nhare mbozha inova internet inokwanisa ine chinhu muzvirongwa izvo zvinoratidzira simba reWi-Fi netiweki. Semuenzaniso, pane iPhone, enda kune iyo Zvirongwa app, izvozvi shanyira Wi-Fi kuti uone iyo Wi-Fi network simba iwe uripo & iyo chiratidzo chesimba yenetiweki iri mukati.
Enda kuUbatsiro Chirongwa cheako Wireless Adapter
Vashoma vagadziri ve wireless network Hardware kana notibhuku maPC vanopa software maapplication ayo anotarisa isina waya yemasaini. Aya maapplication anozivisa simba remasaini & mhando zvichienderana nechikamu kubva pa0 kusvika 100 muzana & zvimwe zvakadzama zvakagadzirirwa zvakanyanya kune Hardware
Wi-Fi Kutsvaga system Ndeimwe Imwe Sarudzo
Iyo Wi-Fi yekutsvaga sisitimu mudziyo inoongorora mafambiro eredhiyo munzvimbo yakavakidzana uye inowana simba remasaini rekuvhara neasina waya mapindiro. Wi-Fi detector sexist muchimiro tudiki Hardware zvishandiso zvinoenderana nekiyi cheni.
Yakawanda yeWi-Fi yekutsvaga sisitimu inoshandisa seti iri pakati pe4 ne6 ma LED kuratidza simba remasaini mumayuniti emabhawa senge iyo Windows utility. Kwete senzira dziri pamusoro, asi maWi-Fi ekuwanikidza masystems haayeri simba rekubatana asi munzvimbo yayo, ingo fungidzira simba rekubatana.
Categories Internet Glossary Leave mhinduro
WiFi hotspot mambure ekuwana mapoinzi ayo anotendera iwe kuti ubatanidze kune yeWiFi network nePC yako, smartphone kana chero chishandiso kana usiri kure nehofisi yako kana pamba network.
Mabhizinesi mazhinji, maguta, & mamwe masisitendi atanga kuendesa WiFi hotspot iyo inobatsira vanhu kuti vabatanidzwe kune yakasimba, nekukurumidza internet yekubatanidza iyo inowanzo kuve nekukurumidza kupfuura isina waya nhare mbozha.
Zvakadaro chii chinonzi WiFi hotspot & inoshanda sei? Hotspots dzakachengeteka here? Verenga zvese info iwe aunoda pazasi.
WiFi hotspot inoshanda sei?
Iyo nharaunda WiFi hotspot inoshanda yakafanana neiyo Wi-Fi yekubatanidza iyo iwe yaunogona kuwana muhofisi yako kana kumba. Hotspots dzeWiFi dzinoshanda nekuve neinternet yekubatanidza & shandisa yakasarudzika isina waya chishandiso, semuenzaniso ma routers & modem, kugadzira isina waya kubatana, kubva kwaunogona kubatanidza smartphone, piritsi, PC, kana imwe nhare.
Iko kumhanya, simba, renji, & mutengo weiyo WiFi hotspot inogona kusiyana. Zvakadaro iyo pane iyo pfungwa yese kuseri kweWiFi hotspot yakangofanana neyemusha-based WiFi netiweki, & iwe unogona kulink kune & kushandisa WiFi hotspot zvakafanana iwe ungashandise yemukati yeWiFi network.
WiFi hotspots Mhando
Kunyangwe hotspots dzeWiFi kazhinji dzakafanana, kune mamwe marudzi akasiyana enzvimbo dzinowanikwa, uye vane mashoma misiyano yakajeka.
Veruzhinji WiFi hotspot
Yeveruzhinji WiFi hotspots ndizvo zvazvinoita senge. Hotspots dzakadai kazhinji - kunyangwe zvisiri nguva dzese - dzakasununguka kushandisa. Nzvimbo dzakaita semakamuri, raibhurari yeruzhinji, zvitoro zvekutengesa, & mamwe masangano akadaro & makambani anogona kupa yemahara, yeruzhinji yeWifi kubatana kune vatengi. Mumataundi mashoma, manejimendi manejimendi kana maIPs anogona zvakare kupa veruzhinji maWiFi kubatana mahara mune dzimwe nzvimbo. Izvi zvinowanzove zvemahara, zvichiri munzvimbo shoma, senge maairport nemahotera, iwe unofanirwa kubhadhara kuti uwane kune yeruzhinji WiFi hotspot.
Nharembozha WiFi hotspots
Kune mamwe marudzi akasiyana enzvimbo dzenharembozha. Semuenzaniso, iwe unoziva here kuti iwe unogona kushandisa iyo iPhone seWi-Fi hotspot? Izvo zvakafanana ndizvo chaizvo zvevakuru Android mafoni. Ingo batidza chinhu ichi pafoni yako & unoshandisa data yaro yemagetsi kugadzira iyo WiFi hotspot. Gare gare, iwe unogona kunamira kune ino hotspot nePC kana imwe nzira chishandiso iyo isingasanganise data renhare.
Zvakare iwe unogona kutenga chinangwa-chakavakirwa nharembozha yeWi-Fi hotspots iyo inoitirwa kushandura nharembozha data kubatana mune ine simba WiFi kubatana. Vanhu vanoshanya zvakanyanya nekuda kwebasa kana vanogara vachitsvaga mukana wekubatika kweWiFi yakavimbika vanogona kuve nechokuita nechimwe chezvinhu zvakadaro zvinogona kutengwa kubva kumafemu mazhinji efoni.
Nzvimbo dzakabhadharwa kare
Nzvimbo dzekubhadhara dzeWiFi dzakabhadharwa dzakafanana nedzenhare dzemaseru, dzichiri neyakaganhurirwa dhata iwe yaunogona kushandisa. Unogona kubhadharira iyi data, uye mushure mekupera, unogona kubva watenga zvimwe. Iyi inzira huru yekutora nharembozha isina hofisi refu yekunyoresa.
Nzira yakapusa yekuwana WiFi hotspot ndeyekuvhura PC yako kana nhare & kutanga kutsvaga. Munzvimbo dzinoverengeka dzeveruzhinji, iwe uchaona kuti kune akawanda akavhurika, eruzhinji maWiFi hotspots iwe aunogona kubatana nawo, mahara emutengo. Iwe unogona kutotsvaga nzvimbo dzeWiFi dzinopihwa neyako ISP.
Gadzira WiFi Vakafa Nzvimbo - A. WiFi yakafa nzvimbo ingori nzvimbo iri mumba mako, chivakwa, nzvimbo yebasa, kana chero dzimwe nzvimbo dzinotarisirwa kuvharwa neWi-Fi, asi hazvishande ipapo - maturusi haakwanise kubatanidza kunetiweki. Kana iwe ukatora gadget munzvimbo ine vakafa - pamwe urikushandisa piritsi kana smartphone uye wopinda mukati mekamuri uko kune nzvimbo yakafa - iyo Wi-Fi inomira kushanda & haugone kuwana masaini. -Fi yakagadzirwa, saka inogona kuvakwa munzira dzinokanganisa iyo Wi-Fi. Zvinhu zvakakura zvesimbi zvakaita semadziro esimbi kana mafaira makabati aigona kutovharira maWi-Fi masaini.
Nzira dzekugadzirisa WiFi Dead Zones
Pazasi pane mashoma matipi ekufukidza yako Wi-Fi kufukidza.
Fambisa Rauta Yako
Kana iyo router iri mune imwe kona yeimba yako, imba, kana nzvimbo yebasa uye paine nzvimbo yakafa mune imwe kona yeimba yako, edza kuendesa iyo router kune imwe nyowani nzvimbo nzvimbo pakati peimba yako, imba, kana nzvimbo yebasa.
Chinja Antenna yeRouter Yako
Ita shuwa kuti antenna yeisina waya yako router iri kumusoro uye yakatwasuka ichinongedza. Kana ichinongedzera yakatwasuka, haugamuchire iwo iwo huwandu hwakaenzana hwekuvhara.
Spot & Dzosera Blockades
Kana yako Wi-Fi router ichengetwa kunze kwesimbi faira kabhodhi iyo inoderedza yako chiratidzo chesimba. Edza kumisazve nzvimbo yako kuti uwane simba resiginali uye uone kana izvozvo zvichibvisa nzvimbo yakafa.
Chinja kune Yakasarudzika-Yakatsetseka Wireless Network
Shandisa gadget senge yeApple kana muSSIDer yeWifi Analyzer Mac kana Windows kuti uwane yakanyanya kuwanda isina waya netiweki kune yako yeWi-Fi network, inotevera chinja marongero pane iyo router kudzora kupindirana kubva kune mamwe mawebhusaiti asina waya.
Gadzira Wireless Kudzokorora
Iwe unofanirwa kuseta isina kudzokorora isina waya yekuwedzera kufukidza pamusoro penzvimbo hombe kana pasina rimwe remazano ari pamusoro apa rinobatsira. Izvi zvinogona kuve zvakakosha mumahofisi makuru kana dzimba.
Shandisa iyo Wired Unganidzo kugadzirisa Fix Wifi Zones
Iwe ungatofunga kufunga kumisikidza online Ethernet tambo. Semuenzaniso, kana iwe uine huru isina waya yekuvhara mukati meyakawanda imba yako, asi haugone kuratidzika seunogamuchira chiratidzo cheWi-Fi mukati mekamuri rako rekurara - pamwe une waya dzesimbi huku mukati memadziro. Unogona kumhanyisa tambo yeEthernet kubva kune iyo router kuenda kuimba yako yekurara, kana nekaviri yemagetsi tambo yekubatanidza kana iwe usinga shungu kwazvo kuona tambo dzinodzungaira mupassage, wobva wamisa yakawedzera isina waya router mukati mekamuri. Iwe unozobva watoda isina waya internet kupinda mune yekutanga isina chinhu kamuri.
Kana iwe uine nzvimbo dzisina waya dzisina waya dzinogona kuvimba neiyo router, kwairi kutsvaga, vavakidzani vako, izvo masvingo eimba yako akavakirwa kunze, saizi yenzvimbo yako yekuvhara nzvimbo, mhando dzemagetsi zvigadzirwa iwe, uye panowanikwa zvinhu. Pane zvakakwana izvo zvinogona kukonzera matambudziko, asi kuyedza & kukanganisa kuchakubatsira iwe kudzikisira pasi dambudziko.
Nzvimbo dzisina waya dzisina kufa hadzina kuomeswa kuti uone kana uchifamba padyo nepamba pako, hofisi kana imba. Mushure mekunge mavawana, munogona kuyedza nemhando dzakasiyana dzemhinduro & kugadzirisa chero chiri kukonzera dambudziko.